Kupatsanura uye zviyero zvemasks | JBH Chiremba
Disposable Medical Mask: Disposable medical mask: Iyo inokodzera kuchengetedzwa kwehutsanana munzvimbo yakajairika yekurapa uko pasina njodzi yemvura yemumuviri uye kuputika, inokodzera kuongororwa kwese uye zviitiko zvekurapa, uye neyakajairika yakadzika kuyerera uye yakadzika kuwanda kwepathogenic mabhakitiriya kusvibiswa. .
Disposable Surgical Mask: Inoraswa masiki ekuvhiya: Inonyanya kukodzera kudzivirira ropa, mvura yemumuviri uye kuputika panguva yekuvhiya. Inonyanya kushandiswa pakudzivirira kwekutanga kwevashandi vezvokurapa uye nevamwe vane hukama muzvipatara. Vanachiremba vese uye madhipatimendi ehutachiona Vashandi vemuwadhi vanoda kupfeka ichi chifukidzo.
N95: American yekuenzanisira mwero, yakasimbiswa neNIOSH (National Institute for Occupational Safety uye Hutano)
FFP2: European executive standard, yakatorwa kubva kumatunhu epamusoro enhengo dzeEU dzakabatana pamwe nemasangano matatu anosanganisira European Standards Institute. FFP2 masiki anoreva masiki anosangana neEuropean (CEEN1409: 2001) standard. Maitiro eEuropean ekuchengetedza masiki akapatsanurwa kuita nhanho nhatu: FFP1, FFP2, uye FFP3. Musiyano kubva muAmerican standard ndeyekuti kuona kwayo kuyerera mwero ndeye 95L / min, uye mafuta eDOP anoshandiswa kugadzira guruva.
P2: Australia neNew Zealand matanho ekumisikidza, anobva kuEU zviyero
KN95: China inodudzira uye inoshandisa iyo chiyero, inowanzozivikanwa se "nyika standard"
kumeso muromo mask, mabhedha ekuchengetedza zvakanyanya, simba mubhedha wechipatara, recliner mubhedha wevarwere, kurapa kuraswa, zvakazara muchipatara mubhedha,
simba mubhedha wechipatara, kumeso muromo mask, kurapa kuraswa, recliner mubhedha wevarwere, mabhedha ekuchengetedza zvakanyanya, zvakazara muchipatara mubhedha,